Igumbi lomzobo lesizwe lilungile kwiGetaway eThulileyo @ VNVECT
Igumbi lakho lokulala e igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle sinombuki zindwendwe onguDung
Zifihle kubomi besixeko.
Vuka usemtsha kwaye uve iintaka zicula.
Ukubamba ukuphuma nokutshona kwelanga kumgangatho ophezulu ngekomityi yeti eshushu.
Iflethi ikumgangatho we-4 we-motel, efumaneka kwi-36 km ngasentshonalanga yeHanoi.
Umamkeli uza kukunika isitshixo.
Amagumbi amabini akhululekile ngokugqibeleleyo kumhambi oyedwa, isibini kwaye asebenza kakuhle kubantu aba-4.
Ifestile yamacala amathathu inika umbono omkhulu wentaba. Fumana umoya woxolo omangalisayo ekuseni ngesenzo esilula sokuvula zonke iifestile.
Yonwabela ukuzonwabisa kwi-smart TV ngeNetflix kunye nendawo yokufunda.
Ukutshona kwelanga kubanda kwi-terrace encinci kwaye ungalibali ukuvala ifestile ngaphambi kokuba isibhakabhaka sibe mnyama ukuba awufuni ukulala kule bhedi ekhangayo kunye neengcongconi kunye nezinye izinambuzane ^^.
Ukongeza, unokuqesha i-motobike ukuba ijikeleze. Ixabisa i-5$/ngosuku.
Iikhilomitha ezi-2 kuphela ukuya kwiLali yeSizwe yeVietnam yeNkcubeko yezoBuzwe kunye noKhenketho, apho unokundwendwela izindlu ezininzi eziyimiqondiso yohlanga oluncinci lwaseVietnam ukusuka kuMantla ukuya kumazantsi eVietnam kunye neminye imihombiso ekhethekileyo yeyabantu abambalwa. Eminye iminyhadala, imisebenzi yemihla ngemihla, ingoma kunye nomdaniso zihlengahlengiswa ezilalini (kaninzi kakhulu)
Iikhilomitha ezili-12 ukuya eBa Vi National Park, yenye yezona ndawo zidumileyo zaseVietnam zobuhle bendalo obubalaseleyo, kwaye izinze kwintaba encopho-ntathu ephuma ezantsi emhlabeni. Ipaki yesizwe ibonelela ngokubaleka okukhulu esixekweni ngomoya opholileyo wentaba kwindawo engasemva yamafu, ihlathi kunye nehlathi elishinyeneyo.
P/S: Ndihlala ndijonge phambili ekubambeni abantu abadumileyo ke ndiza kulinda umbuzo ovela kuni kwaye siqalise ukuxoxa ngezinye iinkcukacha ukusuka apho.
Banokuthi Molo kuphela kodwa banokuthetha isiNgesi ngolwimi lomzimba ^^
Umbuki zindwendwe ngu- Dung
Ungandithumela umyalezo ngefowuni ephathwayo ^^